“Ku guuleysiga koobka Europa League wuxuu xili ciyaareedka Chelsea ka dhigi doonaa mid gaar ah” – Maurizio Sarri – Gool FM
“Ku guuleysiga koobka Europa League wuxuu xili ciyaareedka Chelsea ka dhigi doonaa mid gaar ah” – Maurizio Sarri
Dajiye May 28, 2019
(London) 28 Maajo 2019. Tababaraha kooxda Chelsea ee Maurizio Sarri ayaa ka hadlay inuu u arko in xili ciyaareedka Blues uu yahay mid guul ah, isagoo sheegay inuu kasii fiicnaan karo haddii ay dhacdo inay ku guuleystaan tartanka UEFA Europa League.
Kooxaha reer London ayaa habeen dambe ee Arbacada ah ku balansan inay ku wada ciyaaraan finalka UEFA Europa League magaalada Baku ee caasimada dalka Azerbaijan.
Kooxda ku ciyaarta garoonka Stamford Bridge ayaa ku guuleysatay inay u soo baxdo tartanka Champions League xilli ciyaareedka soo socda, kaddib markii ay ku dhameysteen kaalinta 3aad ee dhanka kala sareynta horyaalka Premier League xilli ciyaareedka 2018/2019.
Hadaba macalinkii hore kooxda Napoli ayaa shirka jaraa’id uu kasoo mooqday kahor kulanka habeen dambe ee finalka, wuxuu ka hadlay dhowr arimood ee quseeya kooxdiisa wuxuuna yiri:
“Waxaan qabaa inaan xilli ciyaareed fiican sameynay, xilli ciyaareedkii hore Chelsea ma aysan u gudbin tartanka Champions League, laakiin hada waxaan u gudubnay Champions League xili ciyaareedka soo socda, sidoo kale waxaan ciyaareynaa finalka Europa League”.
“Guud ahaan, waxaan qabaa inuu kani yahay xilli ciyaareed fiican, xaqiiqdii, hadii aan awood u yeelano inaan guuleysano kulanka finalka, wuxuu noqon doonaa xilli ciyaareed aan caadi aheyn ee gaar ah”.
Unai Emery oo ka warbixiyay himiladiisa ugu weyn ee Arsenal kahor kulanka habeen dambe ee finalka Europa League
Sarri oo ka hadlay fursada uu kaga qeyb gali karo N'Golo Kanté kulanka Arsenal ee finalka Europa League